Ukuthobela iCannabis kanye Nezommeli Wezidingo ePeoria | Thomas Howard
Ngomthethosisekelo, abadlali abakhulu nabo bangene embonini ngoba kuyacaca ukuthi insimu ye-cannabis iyimboni enenzuzo kakhulu. Zonke izinkomba zokuthi imakethe izoqhubeka nokukhula ngesivinini esikhulu, futhi abatshalizimali kule mboni bazoqhubeka nokuvuna okukhulu eminyakeni ezayo.
Mayelana neMbewu Ekuthengisweni
Inhlanyelo yezinhlamvu ezothengiswa yathuthukiswa kulandela imithetho emisha kahulumeni yizifundazwe ezahlukahlukene ezazidinga ukuthi abakhiqizi balandele umkhondo wabo. Uhlelo lokuthengisa imbewu luyenza ukuthi abakhiqizi bazi ngokunembile ukuthi umkhiqizo uvelaphi nokuthi uyaphi. Lokhu kusiza ukuhlangabezana nezidingo zokulawula ngenkathi futhi kwenza kube lula kubo ukwanelisa izidingo zamakhasimende.
Ngenxa yalezi zinhlelo, abathengi bathola imininingwane ephelele mayelana nohlobo nekhwalithi ephelele yomkhiqizo wokugcina. Ngaphezu kwalokho, izikali zihlanganiswa ohlelweni lokuthengisa imbewu ukusiza ukuthola umthamo odingekayo ekwelapheni nasekulawuleni izimo zezokwelapha ezahlukahlukene.
Okungcono kakhulu, amasistimu afaka amakhodi wamabhakhasi enza kube lula ukulandelela wonke umkhiqizo kusukela enzalweni uye endaweni oyithengisayo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ukusuka kumthengi kuya kumnikazi webhizinisi anganquma ngokushesha ikhwalithi yawo wonke umkhiqizo we-cannabis abahlangana nawo.
Ngabe Uyayidinga Ummeli Wokuvumelana Ngokubanjwa Kwe-Cannabis?
Uma usebhizinisini le-cannabis noma ufuna ukungena embonini, udinga ummeli wokulandela umthetho we-cannabis. Noma ngabe wenze amasheke asemuva anele, futhi ufunde konke okumele ukwazi ngomkhakha; kunethuba ongaphuthelwa imininingwane engaphula ibhizinisi lakho.
Uma unikezwe ukuthi imithetho ye-cannabis ihluke kwisifundazwe esisodwa kuya kwesinye, ummeli wokulandela umthetho we-cannabis uzokusiza uqonde imithetho nemigomo kwisimo lapho ibhizinisi lakho lisuselwe khona. Njengoba imithetho iqhubeka nokuvela, ummeli uzokugcina uvuselelwa ngokwenzeka kulo mkhakha. Ngale ndlela, uzoba nesikhathi esilula sokuhlala ngakwesokunene somthetho.
Siyinkampani yezomthetho esePeoria, e-Illinois. Igama lami ngingu-Attorney uThomas Howard, futhi ngisebenza nethimba labameli abaqonda izimiso embonini ye-cannabis. Sibe sebhizinisini iminyaka embalwa futhi sisize abanikazi bamabhizinisi embonini ye-cannabis ukusungula nokuqhuba amabhizinisi abo.
Sizimisele ukukuqondisa ezinqubweni zokuqalisa nokusebenzisa ibhizinisi le-cannabis futhi sikwenze uqonde ukuthi iyiphi imbewu okufanele ithengiswe nge-cannabis. Sizokuqondisa futhi ukuthi ungazifaka kanjani izinqubo zokuthengisa imbewu ukuze usizakale ibhizinisi lakho.
Unemibuzo mayelana nebhizinisi le-cannabis nezidingo zokulawula? Thintana nathi ukuze uthole imininingwane enemininingwane ngalokhu nokunye okuningi.